Zidane: “Real Kalsooni Iguma Qabin, Siddaas Ayaan Uga Tagay” – Garsoore Sports
Zidane: “Real Kalsooni…
Tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa daboolka ka qaaday ka tegitaankiisa Santiago Bernabeu isagoo adeegsanaya warqad furan.
48 jirkaan reer France ayaa ku soo laabtay Santiago Bernabeu bishii Maarso 2019, isagoo keenay seddex Champions League oo isku xigta iyo hal koob oo LaLiga ah intii u dhaxeysay Janaayo 2016 iyo May 2018.
Kaddib markii Zidane uu ku hoggaamiyay Madrid hanashada La Liga ololihii 2019-20, kooxda ka dhisan caasimadda Spain waxay la soo kulantay xilli ciyaareed adag kii xigay ee 2020-21.
Zinedine Zidane ayaa shaaca ka qaaday sababaha uu uga tagay kooxda ka dhisan LaLiga ee Real Madrid isagoo u mahadceliyay madaxweyne Florentina Perez oo uu ‘wuxuu iisoo gacan qabtay si wanaagsan waanan u mahadcelinayaa ‘
Zidane oo sababeeynaya ka tegitaankiisa Real wuxuu yiri “kooxdu kalsooni dambe oo aan u baahnaay iguma qabin aniga .”
Wuxuu sheegay ‘inay abuureen shaki iyo is fahandarro.’
“Waxay u baahan yihiin in la barbaariyo. Waxaa aad ii xanuunjisay markaan saxaafadda ka akhriyo guuldarro kaddib, in la i ceyrin doono haddii aanan guuleysan ciyaarta soo xigta. Waxay dhaawacday aniga iyo kooxda oo dhan maxaa yeelay fariimahan si ula kac ah loogu baahiyay warbaahinta ayaa si xun u saameeyay kooxda. Waxay abuureen shaki iyo is fahandarro.”
“Dabcan anigu ma ihi tababaraha ugu fiican adduunka, laakiin waxaan awoodaa inaan siiyo qof walba, ha ahaado ciyaaryahan, xubin ka mid ah tababarka ama shaqaale kasta, xoogga iyo kalsoonida ay ugu baahan yihiin shaqadooda. Si fiican ayaan u aqaan waxa ay koox u baahan tahay.”
Zidane ayaa ugu dambeyn hadalkiisa kusoo gabagabeeyay:
“20-kii sano ee aan joogay Madrid[xitaq cayaaryahan ahaan] waxaan bartay inaad adinka, taageerayaasha, aad rabtaan inaad guuleysataan, dabcan, laakiin wax walba waxay inaga rabtaa inaan siino dhammaanteen: tababarka, shaqaalaha iyo dabcan ciyaartoyda. Waxaan idiin xaqiijin karaa inaan boqolkiiba boqol nafteenna siinnay kooxdan. “
Chelsea Oo Dooneeysa Soo Celinta Lukaku